Faah Faahin: Col.Ciise Jiijiile Oo Lagu Dilay Agagaarka Villa Somalia.
Wednesday July 26, 2017 - 17:49:59 in Wararka by Super Admin
Magaalada Muqdisho ayaa maanta martigelisay iska hor'imaadyo khasaara xooggan dhaliyay kuwaas oo u dhaxeeya ciidamo kawada tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya degmada Wadajir ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 askari ay ku dhinteen dagaal culus oo ka dhacay xaafadda Kaawa Godeey ee degmada Wadajir, goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka loogu magac daray ‘ Xasilinta Caasimadda’ iyo ciidamo melleteri ah ay foodda is dareen.
Dagaalka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo dhaq dhaqaaqa ganacsiga xaafado katirsan degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Kaawa Godeey.
Dhinaca kale ciidamada ilaala gaarka ah ee Villa Somalia ayaa toogasho ku dilay 6 askari oo katirsan ciidamada Sirdoonka dowladda Federaalka, iska hor’imaad muddo socday ayaa sababay dhimashada 6 askari oo uu kamid ahaa sarkaal sare.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in sarkaal katirsanaa Sirdoonka oo magaciisa lagusoo gaabiyay Ciise Jiijiile uu kamid ahaa saraakiishii lagu dilay iska hor’imaad ka dhacay meel ku dhow madaxtooyada Villa Somalia.
Ciidamo si gaar ah u taabacsan Farmaajo ayaa la xaqiijiyay in ay toogteen Col.Ciise Jiijiile iyo 5 askari oo ilaala u ahaa, xiisada colaadeed oo ka dhan ah maleeshiyaadka loogu magac daray ‘Xasilinta Caasimadda’ ayaa lasoo sheegayaa in ay ka jiraan degmooyin dhowr ah oo katirsan gobolka Banaadir waxaana jira warar soo baxaya oo sheegaya in saraakiil katirsan DF-ka ay qaab beeleed uga gadoodeen hub ka dhigis ay wadeen saraakiil madaxtooyada taabacsan.